Blackview Mandefa Smartwatch X1 ary Budget Android Telefaona Varotra, BV5500 Plus | Androidsis
DaniPlay | | Finday, SmartWatch
Miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fivoaran'ny teknolojia haingana dia haingana, misy foana ny zavatra miandry ny maro. Misy vaovao lehibe roa avy Black View momba ny vokatra vaovao, ny voalohany dia famantaranandro ary ny faharoa dia finday goavambe izay hanatevin-daharana ny katalaogin'ny mpanamboatra Koreana.
BV5500 Plus dia finday avo lenta an'ny Android 10 natomboka vao haingana izay miaraka amin'ny vidiny mirary tokoa. Manasongadina ny Black Shark malaza, misy dian-tsipika sonia sonia sy antsipiriany. ny Blackview BV5500 Plus Fitaovana iray manan-danja izy io, misy refy 152.2 x 75.5 x 14 mm ary lanja 255 grama. Vita amin'ny fihazonana tsara izy io, manana endrika marevaka sy kanto izy io raha ampitahaina amin'ireo telefaona mikitroka hafa.
Raha mitady fitaovana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao ary manohitra ny orana, ny vovoka ary ny fahatairana, ity no tsara indrindra, takatry ary mety amin'ny fotoana ivelany. Izy io dia misy naoty IP68 / IP69K tsy tantera-drano ary azo alentika anaty rano 1,5 metatra mandritra ny antsasak'adiny. Ho fanampin'izany, ny BV5500 Plus dia manana endrika mahatalanjona voatazona ho miaramila MIL-STD-810G ho fiarovana azy ireo.
1 Ny toetra ara-teknikan'ny BV5500 Plus
2 Blackview X1, smartwatch vaovao sy kanto
Ny toetra ara-teknikan'ny BV5500 Plus
Blackview BV5500 Plus manampy efijery HD + IPS 5,5-inch miaraka amina vahaolana amin'ny 1.440 x 720 teboka, RAM 3 GB, tahiry anatiny 32 GB ary bateria 4.400 8 mAh mahery. Any aoriana, ny sensor voalohany dia avy amin'ny mpanamboatra Sony misy 0,3 megapixels 5 ary sensor XNUMX megapixel faharoa kosa manohana azy. Ny fakan-tsary selfie anoloana dia XNUMX megapixel ary azo ampiasaina haka sary, horonan-tsary ary rakipeon-tsary amin'ny kalitao tena tsara.
Tsy tsy misy fifandraisana izany, terminal 4G izy io, manampy izany ny fifandraisana Wi-Fi, Bluetooth, NFC ary ampiakarany tariby MicroUSB ny telefaona. Ny mpanamboatra Blackview dia manampy ao anaty boaty headphones izay ahafahanao mihaino ny mozika sy horonan-tsary tianao indrindra miaraka amin'ny bateria 4.400 XNUMX mAh voalaza etsy ambony.
SCREEN IPS 5.5-inch miaraka amina vahaolana HD + (720 × 1440 teboka) - Nisimisy: 18: 9 - Gorilla Glass 3
GPU Vidio ny PowerVR GE8100
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 32 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD
CAMERAS REAR 8 MP Kilonga Sensor - 0.3 MP Secondeur Sensor
CAMERA HATRANY 5 MP sensor
BATERA 4.400 Mah
CONNECTIVITY 4G - Wi-Fi - Bluetooth - NFC - MicroUSB
ASA hafa MIL-STD-810G Naoty miaramila - IP68 / IP69K Voamarina
DIMENSION SY lanjan'ny: 152.2 x 75.5 x 14 mm - 255 grama
PRICE $ 79.29
Blackview X1, smartwatch vaovao sy kanto
Blackview X1 dia famantaranandro marani-tsaina isaky ny fotoana. Izy io dia manana fiasan'ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy ka tsy manadino hafatra na antso manan-danja kokoa ianao. Ny fotoana fampiasana dia mety tsy mitovy amin'ny naoty 5ATM tsy misy rano. Izy io dia manana maody fanatanjahan-tena 9 sy fiasa fanaraha-maso ny tahan'ny fo, miasa amin'ny maha fitaovana ara-pahasalamana azy manokana izy amin'ny alàlan'ny fanarahana ny angon-drakitra fanatanjahan-tena sy ny tahan'ny fo amin'ny fanazaran-tena isan'andro.
Ny bateria maharitra dia manome fampiasana tsy tapaka 10 andro eo ho eo amin'ny vidiny iray noho ny fahantrana amin'ny fanjifana sy ny tahiry angovo mahomby.
SCREEN LCD TFT 1.3-inch miaraka amina vahaolana 240 x 240 pixel
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 MB
BATERA 220-300 mah
Blackview BV5500 Plus sy Blackview X1 efa misy amin'ny AliExpress. Manokana, ny BV5500 Plus dia manana fotoana voafetra atolotra azo vidiana amin'ny vidiny mihena 79,29 $, miaraka amin'ny fihenam-bidy 39%. tsindrio eto hividy azy izao. tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny X1.
Afaka mitsidika ity pejy ity ny mpanjifa mba hahazoana Blackview X1 maimaim-poana amin'ny fipihana eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Blackview dia mandefa smartwatch X1 ary mandanjalanja telefaona finday Android, BV5500 Plus
Fijerena mahafinaritra, hitako fa mahavariana sy kanto!
I José io, azo antoka fa te hisambotra iray aho ary io fizakantena io no iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena.
Mandria eo alohan'ny devon'ny Ink ao amin'ny Boris lehibe ary ny Survival maizina